आत्मनिर्भर महिलाका चुनौती - Khabar Samridhhi
खबर समृद्धि न्युज डेष्क । अफिस बिदा हुनासाथ महिला कर्मचारी हतारहतार घरतिर लम्किन्छन्। घर जाँदा बालबालिका, बुवाआमा र घरपरिवारका लागि फलफूल, हरिया तरकारीलगायतका सामान किनेर लैजान्छन्। घर पुगेपछि अनगिन्ती काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरूष कर्मचारीहरू यी कुरामा मतलब राख्दैनन्। कार्यालय समयपछि ब्याडमिन्टन खेल्न, फिल्म हेर्न, साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने आदि कुरामा उनीहरूको ध्यान जान्छ। बेलुका अबेला घर फर्किने र श्रीमतीले पकाएको खाना खाइदिने मात्रै हुन्छ। त्यसपछिको काम भान्सा तथा लुगाको सरसफाइ पनि महिलाले नै गर्नुपर्छ।
परिवारको आम्दानीमा महिलाको हिस्सा बढ्ने क्रम जारी छ तर भान्साकोठामा महिलाको दायरा कम हुन सकेको छैन। घर बाहिरका काममा महिला निकै सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न थालेका छन् तर सजिलैसँग चिया बनाउँछु भन्ने पुरूषहरू पनि किन बनाउन सकेनौं हामीले ? बालबालिका जन्माउने काम महिलाको हो तर बच्चा हुर्काउने र स्याहारसुसार गर्ने काममा खुला मनले किन सहयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने हरेक सन्तानका बाउहरूले ? श्रीमती आत्मनिर्भर हुँदा श्रीमानलाई नै सजिलो हुने होइन र ? आफ्नै परिवार राम्रो हुने होइन र ? किन बुझेर पनि बुझ पचाउँछौं ?
आजको आवश्यकता महिला र पुरुषको समान सहभागिता र साझेदारी हो। सृष्टिका सुन्दर उपहार कोही अघि र कोही पछि भएर हारजित गर्नु हुँदैन। चिन्तन, सोच, विचार र दृष्टिकोण सुन्दर बनाउन जरुरी छ। जीवन रथको एउटा पांग्रालाई बेवास्ता गरेर अर्को पांग्रालाई मात्र जति धेरै माया गरे पनि त्यो रथ राम्रोसँग गुड्न सक्दैन। महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा घरपरिवार र समाजले सहज र सरल वातावरण बनाइदिनुपर्छ। तब मात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्छ।अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
प्रकाशित मिति : २०७५|११|२८